Kaafi News » TALIYE FADAL MAAHA QABYAALADAYSTE. WQ: XUSEEN ABDIKARIM
TALIYE FADAL MAAHA QABYAALADAYSTE. WQ: XUSEEN ABDIKARIM
Posted on April 28, 2017 in ARTICLES by admin.
Waxaan Maanta oo ay Taarikhdu tahay 14-04-2017 aan qalinka u qaatay in Maqaal Kooban aan ka Qoro Warar Been abuur ah oo laga baahiyay Taliyaha Ciidanka Boliiska S/GUUTO:-CABDILAAHI FADAL IIMAAN iyo Waliba Ciidan waynaha Boliiska.
Taliye Fadal Waa Sarkaalka ugu sareeya Ciidanka Boliiska Darajo ahaan iyo Mansab ahaan,sidaas oo ay tahay maaha taliye isla wayni ay galiyaan Darajada iyo Mansabka uu u hayo Bulshadiisu,waxa taas ku dareensiinaya oo tusaale dhaw kugu ah dhex galka,la Macaamilka iyo la Fadhiisigiisa bulshada Goobaha Hotelada ah ee Dalka.
Taliyaha Fadal waa Taliyaha ugu Da.da yar Taliyayaashii soo maray Ciidanka Booliska Da,da oo ka Caawisay inuu noqda Taliyaha ugu dadaalka badna dhianacyada Kobcinta iyo dhisida ciidamada iyo waxtarkiisa oo noqday kii ugu badna abid ee ay hantiyaan ciidanka booliska jsl kaas oo ay garab taagan tahay xukummaadda oo dareensan doorka uu ciidanka boolisku uu kaga jiro nolosha iyo daganaanshaha dalka.
Taliye Fadal waa Taliyaha kaliya ee so maray ciidanka booliska jsl ee shaqadiisa ciidannimo ka soo bilabay shaqooyinka ugu hooseeya ee askarinimo soona maray dhamman jaran jarooyinka kala sareeyay ee hab Maamulka Ciidanka Booliska waxuu soo noqday O.B-yayste,baadhe,madax baadhiseed,Taliye saldhig,Taliye Qaybeed iyo Hogaanka Hawlaha oo ah Qofka sadeexaad ee Habka maamulkeedka Ciidanka Boliska ugu sareeya ahna u Qaabilsanaha Arrimaha Hawlaha ugu Balaadhan ee Ciidannimo.
Taliye Fadal waxuu soo noqday Hogaanka Hawlaha Ciidanka Boliska jsl oo uu ahaa Muddo ka badan 10 sano taas oo u Sahashay in uu si fudud ugu Guulaysto Hawlaha Adag ee u masuulka ka yahay Taliyaha Ciidanka Booliska oo ah Guud ahaan Sugida amaanka qarankan Barakaysan ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo Waliba ka Hortaga Kooxaha Argagxiso ee Wakhtiyadii u danbeeyay Dhibta aadka u badan ku hayay Dhamaan Caaalamka gaar haan geeskan Africa ee aynu dal ahaan ku naalo.
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Taliye Fadal Waxa lagu xasuusan Dhisida, Kor u qaadida,Tayaynta Ciidanka Booliska Dhinac kasta oo ka mid sida Dhisida Maskaxda oo ay kaaga Markhaati kacayso sida uu u dhiiri galiyo Ciidanka Dhamantood sida siinta Abaal marino kala duwan,sidoo kale Taliyuhu Waxuu ku dadaala sidii Ciidan waynaha Boolisku u Noqon lahayeen Ciidan aqoon ahaan dhisan oo la Tartami kara Qaybaha kale ee Bulshada taas oo ay Markhaati cad kaaga tahay Tirada Ciidanka Booliska ka mid ka ah ee dhameeyay ama ku jira Jamacadaha Dalka iyo Dibada iyo Waliba dadalkiisa uu hada ugu raadinta Waxbarasho Bilaash ah(Scholarships) si ay uga Faa,idaystaan Ciidanka Bolisku.
Taliye Fadal intii uu ciidanka joogay Waxaa uu ku soo kordhiyay Ciidanka Boliska Qalab Badan oo kala duwan kuwaas oo loogu talogalay ka hortaga Rabshadaha ama Mudaharadada,qalaabkaas oo loo tababaray Unug ka mida Ciidanka Booliska si ay ugu isticmaalan sidii loogu talogalay ayadoo laga fogaanayo inuu ka yimaado khasaare hadii aan loo isticmaalin sidii loogu talo-galay.
Taliye Fadal waa saaxibul salah ku dadaal gudashada waajibaadka rabi iyo ilaalinta xaqa uu rabi ku leeyahay taas oo ka dheeraysay ama Fogaysay waxyaabo badan oo ku keeni laaha in uu ku guul daraysto hawshaa baxada wayn leh ee uu qarankan masuulka uga yahay,waxa tusaale fiican kugu ah taas in uu dadaal badan galiyay sidoo loo tirtiri lahaa Maandooriyaha Khamriga oo ah shay xun oo cawaaqib xumo ku keenaya Bulshada hadii aan laga qaban.
Taliye Fadal waa taliyaha ay Ciidanku booliska iyo Bulshada ku xasuusan doona Hawlgalkii uu Hormuudka uu ka ahaa ee Buuraha Gobolka saaxil ee lagu baacsanayay Kooxdii dilka u gaystay Taliyihii Hore ee Qaybta Saaxil(alle ha u naxariiste) ,Talo saarashada rabi iyo dhiirananta Taliyuhu ka sameeyay Muddo ku sinayd 7 Cisho oo joogta ah Buurahas waxa uu ilahay ku Guuleyay inuu gacanta ku soo dhigo Gacan ku dhiiglayaashii iyo Kooxdi la sooctay ee Caawinaysba.